यमलोकमा निर्मला | Nagarik News - Nepal Republic Media
२ चैत्र २०७५ १५ मिनेट पाठ
एक दिन यमराज आफ्नो दैनन्दिनी सकेर विश्राम गरिरहेका थिए। यमदूत (चित्रपट) मृत्युवरण गर्नेको नालीबेली निकाल्दै थिए। यत्तिकैमा यमलोकमा यसअघि कहिल्यै नसुनिएको अनौठो चित्कार सुनियो। यमदूत हस्याङफस्याङ गर्दै यमराजकहाँ आए। र, भने, ‘प्रभु ! अघिको चित्कार पृथ्वीलोकको हो।’ त्यसपछि दुवैले पृथ्वीलोकतर्फ हेरे।
पृथ्वीलोकमा १३ वर्षीया बालिकालाई एक बलिष्ठ ज्यान भएका युवक उखुबारीतर्फ जान संकेत गर्दै थिए। तर, उनी मानिरहेकी थिइनन्।
‘तँ, हामीले भनेको नमान्ने ? कसले भनेको मान्छेस् भन्,’ युवक बोल्यो। ऊ बालिकालाई जबरजस्ती उखुबारीमा लैजाँदै थियो।
बालिका भने युवकको पञ्जाबाट उम्किने प्रयास गर्दै थिइन्। उनी रुँदै, कराउँदै थिइन्।
‘बिन्ती, मलाई केही नगर्नुस् अंकल। प्लिज, मलाई घर जान दिनुस्। आमा पसलमा कुरिरहनु भएको छ,’ बालिकाले अनुनय–विनय गरिन्।
‘नखाने भए सिंहले किन सिकार गर्छ, तँलाई केही नगर्ने भए किन यहाँ ल्याउँथे र ?,’ युवक कड्कियो।
‘बिन्ती छ, म पनि तपाईंकै छोरी÷चेली त हो, ममाथि दया गर्नुस्।’
तर, युवकको ढुंगाजस्तो मन पग्लिएन।
आफ्नो अस्मिता जोगाउन बालिकाले के मात्र गरिनन्। उनको अरण्यरोदन ‘चिलका अघि चल्ला चिच्याएजस्तो’ भयो।
तैपनि, सास छउन्जेल आस।
‘गुहार, गुहार...,’ उनी भएभरको बलले चिच्याइन्। तर, त्यो एकलासको उखुबारीमा उनको गुहार सुन्ने कोही थिएन।
सुन्ने कोही थियो त उखुका झाङ र उनी मात्रै, जो हेर्दा त सजीव हुन् तर निरीह लासजस्तो।
‘तपाईं मेरो अंकलजस्तो मान्छे।’
‘अंकलजस्तो मात्रै हो, अंकल त होइन नि,’ उसले आफ्नो चरित्र देखायो।
‘आखिर ममाथि किन अत्याचार गर्दै हुनुहुन्छ ?’ उनले फेरि रुँदै भनिन्।
‘बढ्ता नबोल, चुप लागेर बस्, बढ्ता बोल्नेको जिब्रो थुत्न पनि आउँछ,’ युवक रुखो बन्यो।
बालिकाको आँसु रोकिएको थिएन। उनले आफूलाई जोगाउने हर सम्भव प्रयास गरिन्। तर, त्यो बलिष्ठ युवकसामु उनको केही चलेन।
यो दृश्य यमलोकबाट यमराज र यमदूतले नियालिरहेका थिए।
‘देख्नुभयो त प्रभु, पृथ्वीलोकमा बालिकामाथिको अत्याचार ?’ यमदूतले भने।
‘कलियुगको लीला हो, चित्रपट। हेर्दै जाऊ अझै के–के देखिने हो,’ यमराजले भने। चित्रपटलाई भने यमराज ग्लानीरहित भावले बोलेझैं लाग्यो।
‘प्रभु, हजुर त यमलोकको राजा, ती पापीको प्राण हरण गर्न सकिँदैन ?’ चित्रपटले भने।
‘तिमीलाई थाहा नै छ नि चित्रपट। विधाताको अघि कसैको केही लाग्दैन। जसको मृत्यु जहिले लेखिएको छ, त्यतिबेलै हुन्छ। कसैको मृत्युको दिन नआई मैले केही गर्न सक्दिनँ। तर, पापीले उसको पापको सजाय भने भोग्नैपर्छ। तिमीले देखेकै त छौ नि, यमलोकमा पापीले सजाय पाएको।’
पृथ्वीलोकमा भने युवक बालिकाको शरीरमा खेल्दै थियो।
‘प्रभु, ती बालिकालाई त्यो दुष्टबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन,’ यमदूतले यमराजसामु बिन्ती बिसाए।
‘तिमीलाई थाहा नै छ नि, चित्रपट। मैले पनि अधिकार र कर्तव्यको सीमा नाघ्न मिल्दैन। नत्र पृथ्वीलोक र यमलोकमा के नै अन्तर रह्यो र ? बरु त्यो युवकको जीवन–लीला बताऊ त ?’
‘अझै ५० वर्ष आयु छ त्यसको, प्रभु।’
‘अनि बालिकाको नि ?’
‘प्रभु, बालिका त केही समयपछि मृत्युवरण गर्दैछिन्।’
‘थाहा पायौं होला नि, यो कलियुग भनेकै ‘पापी’हरूकै हो। यहाँ ‘पापी’हरूकै आयु धेरै हुन्छ। बिचरी ती बालिका अन्याय व्यहोरेर मर्ने भइन्। उनको सहारा बन्न नसकेकोमा मलाई पनि हीनताबोध भइरहेको छ। आखिर, विधिको विधान मैले पनि मान्नैपर्याे नि !’
यता, पृथ्वीलोकमा त्यो युवक आफ्नो कामवासना बालिकाको शरीरमा पोख्दै थियो। बालिका भने जोडले चिच्याइरहेकी थिइन्। ‘ऐया...ऐया...मरे नि आमा...।’
तर, पनि युवक रोकिएको थिएन। बालिकाको शरीरबाट ऊ आफ्नो भोक मेटाइरहेको थियो। केही छिनपछि ऊ तृप्त भयो र, उठ्यो।
‘प्रभु, बलात्कार गरेर मार्नेलाई नै ‘महिला हिंसाविरुद्धको अभियन्ता’का रूपमा सम्मान गरिँदैछ, यो कस्तो उदेक हो पृथ्वीलोकको ?’ उनले यमराजलाई सोधिन्।
‘अब जे गर्छेस् गर। रोए रो, कराए करा। मरे मर,’ युवक बोल्यो।
बालिका भने केही पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। उनी लासझैं उखुबारीमै पल्टिरहेकी थिइन्। उनको आँखाबाट केवल बलीन्द्र भेल बगिरहेको थियो।
बलात्कृत हुँदा खोलिएको लुगा पनि उखुबारीमै असरल्ल थिए। आफ्नो अस्मिता लुटिएपछि उनलाई बाँच्ने मन भएन। उनी लासझैं पल्टिरहिन्।
केही छिनपछि त्योे युवक बालिका भएको ठाउँमा आयो। आफ्नो करतुत लुकाउन बालिकाको ज्यान लिन कसियो। लासझैं पल्टिरहेकी बालिकाको शरीरलाई हेर्याे। र, बालिकाको घाँटीमा उसकै कपडाले बेरेर मार्याे।
यो दृश्य यमराज र यमदूतले पनि नियालिरहेकै थिए।
‘प्रभु, बालिकाको मृत्युको घडी आइसक्यो,’ यमदूतले यमराजलाई जानकारी गराए। यमराज शोक सन्तप्त भए। उनले एकछिन आँखा चिम्लिएका मात्र के थिए, बालिकाको प्राण पखेरु उड्यो र आत्मा यमलोक पुग्यो।
यमलोकमा भर्खरै नयाँ नियम बनाइएको थियो– मृत्यु भएका जीवले यमराजसँग प्रश्न गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार। यमदूतले बालिकालाई त्यसबारे जानकारी गराए। बालिकाले त्यो अवसर उपयोग गरिन्।
‘प्रभु ! म अबोध बालिकामाथि किन यत्रो अन्याय तथा अत्याचार, मेरो दोष के थियो र ?’ बालिकाले यमराजलाई प्रश्न सोधिन्।
‘मैले चाहेर मात्र केही हुँदैन। विधिको विधानमा म पनि बाँधिएको छु। यो मनपरि चल्ने पृथ्वीलोक होइन, यमलोक हो। यहाँ पृथ्वीमा गरेका सबै कर्मको फल भोग्नुपर्छ।’ यमराजले जवाफ दिए।
यमराजको उत्तर बालिकालाई चित्त बुझेन। उनलाई महिलामाथि हुने गरेका अत्याचार सह्य थिएन।
‘महिलाले पुरुषको सिकार पनि हुनपर्ने र ज्यान पनि गुमाउनुपर्ने, पृथ्वीलोकमा यो अवस्थाको अन्त्य त हुन सकेन, के यमलोकमा पनि यसले न्याय पाउन सक्दैन ? यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ?’ बालिकाले यमराजसँग जवाफ मागिन्।
‘मलाई माफ गर। म पनि अधिकार र कर्तव्यको सीमाले बाँधिएको छु। तिमीलाई बचाउनसक्ने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि केही गर्न सकिएन।’
‘एउटा अवोध बालिका अन्यायमा पर्दा पनि बचाउन नसकिने यो कस्तो सीमा हो ? भगवानले त दुःखी, गरिब र अन्यायमा परेकाहरूको मद्दत गर्छन्, होइन र ?’
‘हो तिमीमाथि अत्याचार भएकै हो। तर, विधि विधानविरुद्ध जान म पनि सक्दिनँ। तिम्रो प्राण जोगाउनु विधिको विधानविपरित हुन्छ। तर, यसको अर्थ यो होइन कि भगवानले अन्यायको साथ दिन्छन्।
यमलोकको न्याय पृथ्वीका मनुवाले चाहेजस्तो र देखिने गरी हुँदैन। यसका आफ्नै मर्यादा र सीमा छन्।
बरु, पृथ्वीलोकका मानिसले आगामी दिनमा महिला हिंसाविरुद्ध समाजमा चेतना फैलाउन आवश्यक छ। यो समाजका सबै वर्गको सहभागितामा मात्रै सम्भव छ,’ यमराजले तर्क गरे।
बालिकालाई यमराजको तर्क चित्त बुझेन। महिलाको सम्मान भए मात्रै महिला हिंसा हट्ने उनको बुझाइ थियो। यो नै पृथ्वीलोक र यमलोकको बुझाइ पनि थियो।
यमराजको तर्क चित्त नबुझेर उनले केही समय पृथ्वीलोक नियालिन्। उनले आफूलाई बलात्कार गरेर मार्ने युवक सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्।
महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै ती युवकलाई सम्मान गरिँदै थियो। सम्मानपछि उद्घोषकले उनलाई सम्बोधनका लागि बोलाए।
‘...महिला हिंसा हटाउन पहिले आफू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। आजको यस अवसरमा म महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा सदा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता गर्छु...,’ ऊ भन्दै थियो। उसको सम्बोधनमा दर्शकदीर्घाले पनि ताली बजाइरहेको थियो।
बालिकासँगै यमलोकबाट यमराज र यमदूत पनि यो गतिविधि नियालिरहेका थिए।
आफूलाई बलात्कार गरेर शारीरिक र मानसिक रूपमा मृत तुल्याउनेले सम्मान पाएकोमा बालिका किंकर्तव्यविमुढ बनिन्। र, पुनः यमराजसामु प्रश्न राखिन्।
‘प्रभु! बलात्कार गरेर मार्नेलाई नै ‘महिला हिंसाविरुद्धको अभियन्ता’का रूपमा सम्मान गरिँदैछ, यो कस्तो उदेक हो पृथ्वीलोकको?’ उनले यमराजलाई सोधिन्।
‘पृथ्वीलोकको लीला अपरम्पार छ। यहाँका मानिससँग भगवानले पनि सक्दैनन्,’ यमराज केही रसिक देखिए। ‘उनीहरू त भगवानलाई नै समेत परिबन्धमा पारिदिन्छन्।’
‘अब के त्यसो भए यसलाई केही कारबाही हुँदैन त ?’ बालिकाले भनिन्।
‘केही दिनमा तिमी देखिहाल्छौं नि ! प्रहरी प्रशासनले बलात्कारीलाई कारबाही त परै जाओस्, पत्ता लगाउन पनि सक्दैन। यो घटनाले देश–विदेशमा समेत तरंग ल्याउनेछ।’
बालिकाले यमराजसँग प्रश्न गर्न पाउने समय सकियो। त्यसपछि यमदूतले उनलाई एउटा कार्यकक्षमा लगे, जहाँ कर्मको हिसाबकिताब गरिन्थ्यो। उनले गरेका कर्मको पनि हिसाबकिताब गरिँदै रहेछ। कर्मको हिसाबकिताब गरेपछि मात्रै दण्ड सजाय तोकिँदो रहेछ।
यमदूतको कार्यकक्षमा जाँदा उनले आफूजस्तै नियति भोगेका थुप्रै महिला देखिन्।
तीमध्ये एक त आफ्नै पतिबाट बलात्कार भएकी रहिछन्। यस्तै, आफन्त तथा नजिकका मान्छेबाट बलात्कृत भएका त कति कति।
उनी निकै दुःखी भइन्। उनलाई आफ्नोभन्दा अन्य महिलाले सहनुपरेको पीडाले पिरोल्यो।
केही दिनपछि यमराजले पुनः पृथ्वीलोक नियाले। उनले मानिसका केही झुन्डले बलात्कारको विरोधमा नारा–जुलुस गरिरहेको देखे। ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे, निर्मलालाई न्याय दे’ उनीहरू नारा लगाइरहेका थिए।
यमराज झस्किए। र, आफैंलाई प्रश्न गरे– ओहो ! कतै तिनै अबोध बालिका निर्मला त होइनन्, जसका प्रश्नले म अनुत्तरित भएको थिए ?
उनले भावनामा बहकिएर बोलाए, निर्मला...निर्मला...। तर, यमलोकमा केको नाम अनि थर ?
प्रकाशित: २ चैत्र २०७५ १३:०४ शनिबार
यमलोक निर्मला_पन्त यमराज